Inter Milan oo hanatay Supercoppa Italiana kaddib markii Alexis Sanchez daqiiqaddii 120-aad uu quusiyay Juventus & Kulammada caawa laga ciyaari doono EFL, Spanish Super Cup iyo Coppa Italia – Gool FM
Inter Milan oo hanatay Supercoppa Italiana kaddib markii Alexis Sanchez daqiiqaddii 120-aad uu quusiyay Juventus & Kulammada caawa laga ciyaari doono EFL, Spanish Super Cup iyo Coppa Italia
Ahmed Nur January 13, 2022
(Yurub) 13 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa xalay kulanka Italian Super Cup ku garaacday kooxda Juventus ciyaar qaadatay 120 daqiiqo isla markaana ku dhammaatay 2-1.
Juve ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay qaybtii hore ee kulanka kaddib markii uu shabaqa gaaray Weston McKennie daqiiqaddii 25–aad, hase ahaatee waxaa gool ku laad ku barbarreeyay Lautaro Martinez daqiiqaddii 36-aad ee isla qaybta hore ee ciyaarta.
Kulanka ayaa 90-kiisii daqiiqo ku dhammaaday 1-1, waxaana lagu qasbanaaday in la isla aado waqti dheeri, daqiiqaddii ugu dambeeysay waqtigii lagu daray ayayna Inter goolka guusha ka heshay Alexis Sanchez oo koobka u gacan geliyay naadiga Nerazzuri.
Dhanka kale, waxaa caawa la ciyaari doonaa tartanka Carabao Cup ee laga ciyaaro dalka Ingiriiska wareeggiisa afar-dhammaadka iyadoo Liverpool ay soo dhoweyneyso Arsenal ciyaar u dhigmeysa lugta hore 10:45 habeennimo xilliga geeska Afrika maadaama ay asbuucii hore baaqatay lugta koowaad oo lagu balansanaa in lagu ciyaaro Emirates.
Dhinaca kale, Atletico Madrid iyo Athletic Club ayaa ku hardami doona ciyaar hal lug ah oo nus-dhammaadka tartanka Spanish Super Cup caawa 10:00 habeennimo, waxayna kooxdii caawa adkaata ay la ciyaari doontaa Real Madrid oo fiinaalka tagtay kaddib markii ay Barcelona garaacday.
Geesta kale, waxaa la ciyaari doonaa kulammo ka tirsan tartanka Coppa Italia iyadoo ay is arki doonaan Napoli iyo Fiorentina oo 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika ciyaari doona halka AC Milan ay la dheeleyso Genoa 11:00 habeennimo isla xilliga geeska Afrika.
Chelsea oo jaratay tikitkeeda kulanka final-ka tartanka Carabao Cup kaddib markii ay ka cirib tirtay Tottenham… +SAWIRRO
Muxuu Macallin Xavi Hernandez ka yiri guuldarradii xalay naadigiisa Barcelona kasoo gaartay Real Madrid?